တိမ်တွေကြားထဲကတောင်ပေါ်ရွာလေး | Mandalaygazette's Weblog
တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုသလို Lau Minh Pao ပာာ ဒီနေရာလေးမှာ သူ့ ချစ်သူပောာင်းနဲ့ ဆုံနေကြဖြစ်တယ် ။ ချစ်သူပောာင်းနဲ့ ဆို လို ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ တွေ့ ဆုံခြင်းမှာ ဆန် ကျင်ဘက်လိင်တွေကြားမှာဖြစ်ကြတဲ့လိင်ကိစ္စမျိူးမပာုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေနဲ့နှစ်ယောက်သား တောင်တောင်အီအီေ၇ာက်တတ်ရာ၇ာ စကားလက်ဆုံကျကြတာမျိူးပါ ။ ရှေးပောာင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြန်ပြီးပြောဖြစ်ကြတာမျိူးပါ။ ဒါပာာ ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း က လူမျိူးစုတွေရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဓလေ့တစ်ခုပါ။
“ အတိတ်တုန်းကဒို့ တွေသိပ်ချစ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒို့ တွေ လက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ ကြဘူး “ လို့ 
ပို က ပာာဂျန်းပြည်နယ် ခိုဗိုင်းရွာလေး ရဲ့အမှောင်ညနက်နက်ထဲမှာ သူ့ ချစ်သူကို စောင့်ဆိုင်းနေရင်းနဲ့ ကျွန်မကို ပြောပြတယ်။ သူမျက်လုံးတွေပာာ မျှော်လင့်ခြင်း၊စိတ်အားထက်သန်ခြင်းတွေနဲ့အေ၇ာင်လက်လို့ နေတယ်။
အခုတော့ သူ့ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ ရပြီ။ သူတို့ အချင်းချင်းတွေ့ ကြရပြီ။
“ တို့ နှစ်ယောက် အရင်ချစ်ခဲ့ ကြတဲ့အချိန်တုန်းကအကြောင်းတွေကို ပြန်ပြောပြီး ရင်ခုန်နေကြမယ်။ “
နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ဒီမတ်လ ၂၆၊ ၂၇ နှစ်ရက်မှာတော့ တရုတ်ပြည်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ပောာဒီ ခိုဗိုင်း
ရွာငယ်လေးပာာ အခုလို အချစ်နဲ့ ဆုံဆည်းရာနေရာအဖြစ်နဲ့စည်ကားနေလေ့ရှိတယ်။
ဂျီအိုင် ၊ နမ်၊ တေ၊ ဇောင်၊ စံချီ၊လိုလို နဲ့ ပာုန် တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားလူမျိူးစုတွေ နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်က လူမျိူးစုတွေပာာ ရာ နဲ့ ချီပြီး ဒီ နေရာလေးမှာ စုစည်းလေ့ ရှိကြတယ်။ ဒီအထဲမှာ ပို ရဲ့ 
မိန်းမလည်းပါတယ်လေ။ သူလည်း သူ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပောာင်းကို ဒီမှာပြန်လာတူးဖော်မှာပဲ။
တစ်ချိူ့ ဆို နှစ်ရက်သုံးရက်တောင်ကြိုပြီးခရီးပျင်းနှင်လာကြတာ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ဒေသခံလူမျိူးတွေက
ဒီအချစ်ရွာလေးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းလေးစီစဉ်ပြီးတင်ဆက်ကြတယ်။
ဒဏ္လာရီအဆိုအရတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ပာာဂျန်းပြည်နယ် က
ဂျီအိုင်လူမျိူးမိန်းမလှလေးတစ်ယောက်နဲ့နမ်လူမျိူး ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ကစခဲ့တာပါ။ တိုတိုပြောရရင် ကောင်မလေးက သိပ်လှတော့ သူတို့ လူမျိုးစုတွေက တစ်ခြားမျိူးနွယ် က ကောင်လေးနဲ့ ရသွားမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ၀ိုင်းတားဆီးလိုက်ကြတာ နှစ်ဖက်လူမျိူးစုမှာ သွေးချောင်းစီးတဲ့ အထိဆိုပါတော့ ။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာကြတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးပာာ နှစ်ဖက်မျိူးနွယ်စု အဆင်ပြေ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချစ်ရက်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ ကြတယ်တဲ့ ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လည်းသိပ် ချစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ ဝေးနေရတဲ့ အခါ ပူဆွေးသောကေ၇ာက်ကြတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ပဲ ဒီ လ ၂၇ ရက်နေ့ေ၇ာက်တိုင်း ဒီနေရာလေးမှာနှစ်ဦးသားတိတ်တဆိတ်ဆုံစည်းကြမယ်လို့ ကတိက၀တ်ထားခဲ့ကြသတဲ့။ အဲဒီကတည်းက ဒီနေရာလေးပာာ ချစ်သူတို့ ရဲ့ ဆုံဆည်းရာနေ၇ာလေးအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့ဆိုပါတယ်။
အချိန်တွေကြာလာပေမယ့်လည်း ဒီနေရာလေးပာာ ချစ်သူတို့ ရဲ့ ဆုံဆည်းရာနေ၇ာလေးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိလာခဲ့တာပာာ ဒီနေ့ အချိန်အထိပဲဆိုပါတော့။ ခုချိန်မှာတော့ ဒေသခံ မိန်းမပျိူလေးတွေပာာ ချစ်သူနဲ့ အချိန်းအချက်လုပ်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါပြီ။
ဖုန်းတွေနဲ့စာတိုလေးတွေပို့ ကြ၊ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြနဲ့ချစ်သူတို့ ဆုံဆည်းဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါပြီ။
ပာနွိုင်းမြို့ ရဲ့ မြောက်ဖက် မိုင် ၃၁၀ ( ၅၀၀ ကီလိုမီတာ) ကွာဝေးတဲ့ ဒီနေရာလေးကို လမ်းသစ်တွေလည်းဖောက်ပြီးလို့ သွားလာရတာပိုပြီးလွယ်ကူလာပါပြီ။ နမ် ဘာသာနဲ ခိုဗိုင်းဆိုတာ တိမ်တွေကြားထဲကတောင် လို့အဓိပါယ်ရပါသတဲ့ ။
ဒီနေ့ ခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ အချစ်ကိစ္စပာာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်သွားပြီ။ ပိုပြီးလည်းပွ င့် လင်းလာကြတယ်။ ပိုပြီးလည်းခေတ်မှီလာကြတယ်။ ကျုပ်တို့ တုန်းကလို မပာုတ်တော့ဘူး လို့“ ပာာသီနိုင် “ က ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတယ်။
ပို ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျား၊ မိန်းမ အားလုံးပာာ ကိုယ့်ချစ်သူလာမယ့်လမ်းဖက်ကို အသီးသီး မျှော်လင့်တကြီးနဲ့စောင့်စားနေကြတယ်။ ပို ကလည်း သူ့ ချစ်သူပောာင်းကို စောင့်နေတာပဲ ။ ၁၀ နာရီလောက်ကျရင်လာမယ် လို့သူ့ ကောင်မလေးကပြောထားတယ်။
ကောင်မလေးနဲ့ ဆုံရင် အရင်တုန်းက နှစ်ဦးသားဆုံခဲ့ ဖူးတဲ့ ရွှေေ၇ာင်ကာလတွေကို ပြန်ပြီးတူးဖော်ကြမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပို ရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းအရိပ်အေ၇ာင်တွေကိုထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်နေ့ မနက်ကျတော့ မနေ့ ညက သည်းသည်းထန်ထန်ရွာတဲ့ မိုးကြောင့် သူတို့ ရဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ ပျက်သွားတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်။
မပူပါနဲ့ လေ။ နောက်နှစ်တွေရှိပါသေးတယ် ။ အချစ်ဆိုတာရှိသရွေ့သူတို့ တွေ့ ဖြစ်ကြဦးမှာပါပဲ။
saw in yahoo odd news . will put yahoo links later. now the connection is too slow to open the link.😦
← နိုင်ငံရေး ဟာသများ	ငရုပ်သီး အမည်းမျိုးတဲ့ →